Kismaayo News » Shabelle, shar wadaha cusub
Shabelle, shar wadaha cusub
Kn:Fadhi kudirirku waa nooc dagaal oo saaxada Soomaalida ku soo biiray kadib markii bulshada Soomaaliyeed ay soo kartay dagaaladii dhiigga badani ku daateen ee ehliga ahaa.
Fadhi ku dirirka inta badan dhiig kuma daato, waxaana suuro gal ah in asagoo la isu qoslayo akhiiran lagu kala kaco madasha laga afuufayay burgaantida qabiilka iyo faanka ku salaysan cusurka.
Fadhi ku dirirka waxuu ku bilaamay nooc loo yaqaan faruuryo ku dirir, waxaase inta aaladda casriga ay Soomaalidu la qabsatay ku biiray Faro ku dirir. Asaliyan, fadhi ku dirirku wuxuu ku koobnaa oo kaliya koox, beel ama qof ka saraysiin mid kale, markaasi ama hanoqoto dhinaca fiicnida, maalqabeenimada, geesinimada IWM, laakiin waxaa tan iyo intii ay Kismaayo la wareegeen ciidamada huwanta hawada soo galay nooc cusub oo fadhi ku dirir ah kaasi oo aas-aas kiisu yahay nac, xasad iyo xiqdi.
Hadaba Idaacadda Shabelle ayaa ku sifawday galitaankii Kismaayo kadib, sharwade naar afuuf. Waxay joogto u afuufaan dagaal, dil, dhac, boob, kufsi, iyo dad isku halaagsamay magaalada Kismaayo gudaheeda.
Qofka aan xog ogaalka u ahayn Kismaayo hajoogtee, dadka ay eheladoodii ku suganyihiin Kismaayo, joogto ayay ula xiriiraan, saacad kasta waxa soo kordhayna way ogaadaan, Kismaayo baadiye ma aha ee waa magaalo leh taleefan guri iyo gacan iyo waliba internet xawaare fiican leh.
Kismaayo waxaa gacanta ku hayn jiray Alshabaab ka hor inta ayna Huwantu la wareegin, Shabelle ma shurkay kula ahayd oo dhaqaalaha ay hawlaheeda ku socodsiiso ayay ka heli jirtay? Ma nacab aan jecleyn wanaaga iyo horumarka bulshada Soomaaliyeed ayaa maamula mise ookiyaale khaldan ayaa u gashan?.
Kay dooniba hanoqotee, waxaa muuqda in mulkiilaha iyo shaqaalaha idaacadda Shabelle ay aad ugu farxi lahayd in dadka Kismaayo ku nool ay baaba’aan ama isku dhamaadaan si lamid ah inta ay jeclaan lahaayeen Alshabaab ama ka sii daran.
Shabaabka la garay oo arintoodu waxay tahay, cadkanoow ama ku cunay ama ku ciideeyay ee sidoo kale sow ma cadda in Shabelle ay ayadun acalafka magaalada ay ka helaan Shabaabku ay wax ka heli jireen. Haday sidaasi tahay maxay kala dooriyaan Shabelle iyo Shabaabka la bursanayo, sow ma habooni in ayadana la qarameeyo.
Kismaayo waa magaalo Soomaaliyeed, qof kasta oo muwaadin ah oo ku nool waxuu leeyahay hantidiisa maguuraanka ah, wuxuuna xaq u leeyahay in la ilaaliyo amaanka naftiisa iyo hantidiisa, isla markaana uu helo cadaalad loo simanyahay. Reer Kismaayo waxay u baahanyihiin nolol iyo nabad la mid ah tan ay heleen magaalooyin badan oo dalka kamid ah, qof kasta oo Soomaali ah meesha uu doono haku noolaado ama haka soo jeedee waxaa waajib ku ah inuu Kismaayo la damaaciyo wanaag.
Qofka shaydaanka u adeega, sharka huriya ee doona in laga qaxo, lagu halaagsamo deegaano idil oo ay ku noolyihiin malaayiin qof, waajib ayaa ka saaran qof kasta oo xil kas ah inuu bulshada ka qabto oo ula diriro sidii nimankii foolka duubnaa ee Shacabka duleeyay, diintana ka yeelay maaskaraati hadba loo gashto dhinicii la doono.
Shabelle, sharwadaha cusub.